Kazakhstan: Resahan’ny Tontolon’ny Bilaogy ny Olana Momba ny Fiteny · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan: Resahan'ny Tontolon'ny Bilaogy ny Olana Momba ny Fiteny
Voadika ny 09 Mey 2018 2:49 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, Español, 简体中文, 繁體中文, 日本語, English
Volana iray talohan'izao, nambaran'i Nurgeldy tao amin'ny neweurasia ny fomba ataon-dry zareo hiadiana amin'ny zara fa fahafantarana ny toetoetra misy ny fiteny any Kustanai, tanàna any avaratr'i Kazakhstan. Niteraka somary fifandirana navaivay ihany tao anatin'ny dika amin'ny teny Rosiana sy Anglisy amin'ilay bilaogy ny lahatsoratra nalefany, mahakasika ireo olana toy ny hoe maninona ireo vahoaka an-tanàndehibe no zara raha miteny ny fiteny Kazakh, ary nahoana ireo foko Kazakhs no tsy mahavita ihany koa mampiasa azy io.
Ireto no antony tanisain'ireo bilaogera : tsy fisian'ny filàna ara-tsosialy ny atao hoe fiteny ofisialy tany amin'ny andian-taona 1980-90s tany, firefarefan'ny lentan'ny fampianarana ny fiteny Kazakh tany amin'ieo sekoly mampiasa sy miteny rosiana ary ireo departemanta teny amin'ny anjerimanontolo, tsy fisian'ny famporisihana ireo tanora an-tanàndehibe ary tsy fisian'ny ezaka avy amin'ny fanjakàna amin'ny fampandrosoana, fampianarana ary fampiroboroboana ilay tenin'ny firenena.
Taty aoriana , ny adihevitra dia nitohy tany amin'ny ampahany miteny rosiana tao amin'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpampiasa LiveJournal ao Kazakhstan. Nijoroan'i Miss-crazy ny filazana ny zavamisy hoe mbola mijanona ho mahaketraka ny fenitry ny fampianarana ny fiteny Kazakh any am-pianarana. Etsy ankilany, ny toedraharaha dia tena vao mainka alentiky ny kolikoly, satria omena naoty ‘A’ ireo ankizy mandritra ny lesona Kazakh raha misoratra fotsiny ho mpamandrika ny gazety “Druzhnie Rebyata” (Zaza Mahafinaritra) (Rosiàna).
famandrihana “Tsy maintsy atao” – fomba iray atao mba hamelomana amin'ny fomba artifisialy ireo asa fanontàna efa miala aina ara-toekarena avy amin'ny fanjakàna, izay efa miendrika kolikoly miafina manjaka sahady eny anivon'ny toerana fampianarana ankizy.
Mandritra izay fotoana izay ny ankizivavy rosiana iray, Slavoyara, monina any avaratr'i Kazakhstan – faritra iray izay tena noheverina hatrizay ho “tsy-Kazakh” indrindra – dia milaza fa mivoatra isanandro ny fahaizany ny fiteny Kazakh. Hoy izy, notsongaina manokana: “Takatro daholo izay zavatra lazaina ary efa somary mora sy tsy dia mananosarotra ho ahy ny mivadika ho amin'ny fiteny Kazakh”, izay nahatonga ireo namany haneho fanajàna sy hankasitraka azy.